को हुन् सिरिन्ज आक्रमणको आरोपमा पक्राउ परेका सन्तोष? | Nagarik News - Nepal Republic Media
को हुन् सिरिन्ज आक्रमणको आरोपमा पक्राउ परेका सन्तोष?
काठमाडौँ - सिरिन्ज आक्रमणमा संलग्न भएको आशंकामा पक्राउ परेका सन्तोष कार्कीकाे रेष्टुरेन्ट व्यवसायी रहेको खुलेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार पक्राउ परेका कार्कीको महाराजगञ्जमा रेष्टुरेन्ट रेहेको छ।
उनले भने,‘ केही समयअघि मात्र कार्की वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर रेष्टुरेन्ट खोलेका थिए।’ प्रहरीले युवतीलाई आक्रण भएको क्षेत्रमा जडान गरिएका सीसी टीभीबाट फुटेज निकालेर अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसकै आधारमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरी कार्कीसम्म पुगेका थियो। महिलामाथि श्रृखलावद्ध शंकास्पद ‘सिरिञ्ज’ आक्रमण भएपछि प्रहरी उनीहरुको खोजी तिब्र पारेको थियो।
प्रहरीसँगको बयानको क्रममा उनले सिरिन्ज नभइ काँटीले घाेचेको बताएका छन्। उनले रमाइलोका लागि यसो गरेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। रोग सार्ने नियमले नभइ रमाइलोको लागि काँटी घोचेको र ढल्कु र पकनाजोल क्षेत्रको घटनामा आफ्नो संलग्नता पनि स्वीकार गरेका छन्।
पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकासहित आसपासको जिल्लामा शृङ्खलाबद्ध रुपमा सिरिन्ज आक्रमणको घटना भएका उजुरी परेपछि प्रहरीले सर्तकता बढाएको छ। बनेपामा पनि सोही प्रकृतिको घटना भएको छ। रोग सार्ने नियतले आक्रमण गरेको हुनसक्ने आशंकामा पीडित महिलाहरुलाई एचआईभीविरुद्धको एआरटी औषधी चलाइएको छ भने हेपाटइटिसविरुद्ध भ्याक्सिन पनि दिइएको छ।
प्रकाशित: १३ असार २०७६ ११:१२ शुक्रबार